मल घोटालामा छानवीन
अन्नपूर्ण बिहीबार, कात्तिक १६, २०७४ 458 पटक पढिएको
हिउँदेबाली लगाउने समयमा किसान रासायनिक मल नपाएर समस्यामा पर्ने भएका छन् । सरकारले अनुदान दिए पनि कृषि सामग्री कम्पनीको लापरबाहीका कारण यस्तो समस्या आइलागेको हो । गहुँ, मसुरोलगायतका हिउँदेबाली लगाउने बेलामा भएको मल अभावका कारण कृषि क्षेत्रको उत्पादनसमेत प्रभावित हुनेछ । नेपालको अर्थतन्त्रमा कृषिको महत्वपूर्ण योगदान रहेकाले यसले आर्थिक वृद्धिदरसमेत घट्नेछ ।
कम्पनीले हिउँदे बालीको लागि ल्याएको मल कम तौलको पाइएपछि समस्या उत्पन्न भएको हो । भारतबाट आयात गरिएको युरिया मलका प्रत्येक बोरामा पाँचदेखि १० किलोसम्म कम भएको भन्दै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले छापा मारेको छ । स्थानीय डिलरले शंका लागेपछि जोख्दा कम्पनीले कम तौलको मल बेचेको थाहा भएको थियो ।
मल भण्डारण गरिएको क्षेत्रीय कार्यालय विराटनगरको गोदाम अहिले अख्तियारको नियन्त्रणमा रहेको छ । उक्त गोदाममा ५० हजार बोरा अर्थात् दुई हजार पाच सय मेट्रिकटन मल रहेको छ । यसरी कम तौल भएको मल सेटिङमा ल्याएर बेच्दा एक करोडभन्दा बढी घोटाला भएको देखिन्छ । एक किलोमा १९ रुपैयाँ ६६ पैसा अनुदानमा आयात भएको मलको लागि सरकारले कम्पनीलाई अधिकार दिँदै आएको छ ।
सरकारी कम्पनीबाट भएको किसानलाई असाध्यै मर्का पार्ने यस्तो कामका कारण तराईका किसान सबैभन्दा बढी मर्कामा पर्ने देखिन्छ । हिउँदमा सिँचाइ व्यवस्था धेरै भएकाले पहाडमा भन्दा नेपालको अन्न भण्डार तराईमा बढी मात्रामा रासायनिक मलको माग हुन्छ । कम तौलको मल पूर्वका झापा, धनकुटा, उदयपुर सप्तरी, सिराहालगायतका क्षेत्रमा बेचिसकिएको छ ।
कम्पनीका अधिकारीहरूले मलमा बद्मासी गरेको यो पहिलोपटक होइन । यसअघि पटकपटक समयमा मल नल्याउने मात्र हैन, कम गुणस्तरको मल ल्याएर कम्पनीले किसानसँग खेलबाड गर्दै आएको छ । कृषिलाई प्रमुख पेसा बनाएका किसानहरूले बाली लगाउने समयमा मल नपाउने समस्या नेपालमा नौलो होइन । किसानको भविष्यमा मात्र हैन, देशको आर्थिक विकासमा समेत खेलबाड गर्दै आएका सरकारी अधिकारी र यस्तो सेटिङमा संलग्न अन्य पक्ष कारबाहीका भागीदार हुन् । नत्र द्रव्यमोहका कारण किसानलाई मर्कामा पार्नेहरू प्रोत्साहित हुन्छन् ।
कम तौल भएको मल नियन्त्रणमा लिएर कारबाही अगाडि बढाउनु अख्तियारको कर्तव्य नै हो । तर यसकै कारण किसानले मल समयमै नपाउने भने हुनु हुँदैन । त्यसको लागि सर्प पनि मर्ने, लठी पनि नभाँचिने तरिका अवलम्बन गरिनुपर्छ । अख्तियारले नियन्त्रणमा लिएको गोदाममा भएको मल जोखेर तौलअनुसार बेच्नु उचित तरिका हुन सक्छ । अनुसन्धानका क्रममा मल गोदाममा राखेर बाली लगाउने महत्वपूर्ण समयमा किसानलाई निरास पार्नुभन्दा मल किसानसम्म पुर्‍याउँदा किसानका समस्या समाधान हुन्छ ।
चाहिँदा नपाइने तर अनुसन्धानपछि उपलब्ध हुने मल किसानको लागि ‘लगनपछिको पोते’ जस्तो हुन सक्छ । यससँगै आयातको लागि सम्झौता भइसकेको तर अहिलेसम्म नआइपुगेको मल समयमै ल्याउने पहल पनि कम्पनीले गर्नुपर्छ । अब आउने मलमा ठगी हुन नदिन पनि सचेत हुन जरुरी छ । यसो भनिरहँदा तौलमा ठगेर आपराधिक काम गर्नेलाई कुनै पनि हालतमा छोड्नु हुँदैन । युरिया मलमा भएको घोटाला छानबिन गर्न सरकारले समिति बनाएको छ । समितिले शीघ्र छानबिन गरी दोषीमाथि कडा कारबाही गर्नुपर्छ । कृषि प्रधान देशमा किसानको भविष्यसँग खेलबाड गर्ने अधिकार कसैसँग हुनु हुँदैन ।
बिहीबार, चैत १, २०७४ स्टेफनबाट सिकौं
बुधवार, फागुन ३०, २०७४ चिकित्सक बिरामी सम्बन्ध
'गलत गर्ने अभिलाषा भए दण्ड भोग्न तयार हुनु' 487
मापदण्ड बिनै सडक खन्दा फेवाताल संकटमा 333
अस्पताल भवन अधुरै, जग्गादाता खिन्न 352
तक्मा वितरण सोर्सफोर्समै, बर्सेनि ६ करोड खर्च 385
स्थानीय तहलाई स्वास्थ्य संस्था हस्तान्तरण 207
स्थानीय तहमा विवाद : 'महिलालाई यस म्यान बनाइयो' 425
कांग्रेस पराजय अपेक्षित थिएन र ? 185
विकासका लागि स्थायी सरकार 108
प्रदेश बलियो बनाउने हो भने 133
चेपाङ बस्तीमा अनिकाल 160
नियन्त्रणबाहिर डढेलो 150
﻿चिनियाँ प्रधानमन्त्रीलार्इ ओलीको बधार्इ 641
आगो बस्तीमा पस्दा २५ लाख बराबरको क्षति 119
घुससहित लेखापाल पक्राउ 635
भूकम्पका बेला कारागारबाट फरार कैदी पक्राउ 186
नास्टका फुर्सदिला वैज्ञानिक 435
सामसुङ एस ९ र एस ९ प्लस 2266
दुई वर्षीय बालकले ४७ वर्षका लागि लक गरिदिए आईफोन 10530
भोडाफोन र नोकियाको महत्वाकांक्षी ‘मुन मिसन’ योजना 2075
एक शिक्षक: जसले कालोपाटीमा आकृति कोरेर कम्प्युटर सिकाउँछन् 4670
पुरानो सिम नफाल्नुहोस्, फसिएला ! 13244